တိုင်းရင်းသား၊ နိုင်ငံသား အစ္စလာမ်သာသနာဝင်တို့အတွက် ခေါင်းစဉ်(၄)ရပ် | Lumyo Chit
တိုင်းရင်းသား၊ နိုင်ငံသား အစ္စလာမ်သာသနာဝင်တို့အတွက် ခေါင်းစဉ်(၄)ရပ်
– ဘယ်က လာခဲ့ကြသလဲ …… ?
– ဘယ်မှာနေခဲ့ကြသလဲ ……… ?
– ဘာတွေလုပ်ခဲ့ကြသလဲ ….… ?
– ဘယ်ကိုသွားကြမှာလဲ ……… ?
မြန်မာနိုင်ငံရယ်လို့ တိတိကျကျဖြစ်တည်ပေါ်ပေါက်မလာခင်က ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံတည်ရှိတဲ့ကုန်းမြေနေရာဒေသ ဧရိာယာအတွင်းသိုိ့ တိဘက်ကုန်းမြေမြင့်မှ –
ဒီသမိုင်းကြောင်းတွေကို လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ၀င်လာကြတဲ့ အစ္စလာမ်သာသနာဝင် လူ့အစုအဝေးဟာ – (၁) အာရဗ်လူမျိုးများ၊ (၂) ပါရှင်းလူမျိုးများ၊ (၃) မဂိုမင်းဆက်နွယ်များ၊ (၄) တရုတ်ပြည်မှ တာရ်တာရ် ခေါ် တူရကီနွယ်များ၊ (၅) ကသည်းမွတ်စလင်မ်များနှင့် (၆) အိန္ဒိယသားမွတ်စလင်မ်များ ဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာကို တွေ့ရပါတယ်။ (ပန်းသေးနှင့် ပသျှူးလူမျိုးများအကြောင်း မပါသေးပါ။)
ဒါ – ဒုတိယအကြိမ် နေရာချထားပေးခြင်းပါ။ မျက်မှောက်ကတွက်ရင် နှစ်ပေါင်း(၃၇၀)ကျော်ပါပဲ။
ညောင်ရမ်းခေတ်မှ အင်းဝခေတ်ဖြစ်လာတဲ့အခါ စနေမင်းတရားကြီး(၁၆၉၈ – ၁၇၁၄)ခေတ်မှာ အစ္စလာမ်သာသနာဝင်တို့ကို … (၁) တောင်ငူ၊ (၂) ရမည်းသင်း၊ (၃) ညောင်ရမ်း၊ (၄) ယင်းတော် (၅) မိတ္ထီလာ၊ (၆) ပင်းတလဲ၊ (၇) တဘက်ဆွဲ၊ (၈) ဘောဓိ၊ (၉) စည်သာ၊ (၁၀) စည်ပုတ္တရာ၊ (၁၁) မြေထူး၊ (၁၂) ဒီပဲယင်းမြို့ …. စသည့် ၁၂-မြို့မှာ နေရာချထားပေးခဲ့ကြောင်း (၁၈၀၁)ခုနှစ် အမရပူရဘုရင် ပိဋကတ်တိုက်တော်မှ ကျောက်တစ်လုံးဗိုလ် ကူးယူခဲ့တဲ့ မှတ်တမ်းရှိခဲ့ဖူးကြောင်း အိန္ဒိယနိုင်ငံ နယူးဒေလီမြို့မှာ ကျင်းပတဲ့ ‘အာရှသမိုင်းကွန်ဂရက်’မှာ တင်သွင်းတဲ့ ဗိုလ်မှူးဘရှင်ရဲ့ စာတမ်းမှာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါဟာလဲ မျက်မှောက်ကတွက်ရင် နှစ်(၃၀၀)ကျော်ရှိခဲ့ပါပြီ။
(၁၈၈၅)ခု အင်္ဂလိပ်-မြန်မာတတိယစစ်ပွဲဖြစ်ပြန်တော့ မင်းလှခံတပ်က ဆီးကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရတဲ့စစ်ပွဲမှာ အမြောက် တပ်ကို ဦးဘိုးကာတပ်မှူးအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့ရတယ်လို့ မကွယ်လွန်မီကိုယ်တိုင်ပြောလို့ သိခဲ့ရတယ်။ (၁၈၈၅)ခု အထက်မြန်မာနိုင်ငံ သိမ်းဖိုိ့ သရက်မြိုက အင်္ဂလိပ်တပ်တွေချီတက်လာတော့ ခုခံတိုက်ခိုက်မယ်လို့ သီပေါဘုရင်က စစ်ကြေညာပြီး စစ်ကြောင်းကြီး သုံးကြောင်း (၁) တောင်ငူစစ်ကြောင်း၊ (၂) အောက်မြစ်စစ်ကြောင်း (၃) ဧရာဝတီစစ်ကြောင်း တို့က ခုခံကြမယ်လို့ အမိန့်တော်ထုတ်လို့ အက္ကပတ်မြင်းဝန် ပင်လယ်မြို့စား မင်းကြီး မဟာမင်းထင်ရာဇာ (ငယ်မည် ဦးချုံ – အစ္စလာမ်သာသနာဝင်)ကို တောင်ငူစစ်ကိုင်းဦးဆောင်စေခဲ့တယ်။ ကုန်းဘောင်ဆက်ရာဇ၀င်တော်ကြီး တတိယတွဲ စာမျက်နှာ(၇၁၂)မှာ တွေ့ရတယ်။
(၁၉၃၈)ခု ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၃)ရက်နေ့မှာ ‘ဗမာမွတ်စလင်မ်နိုးကြားရေးအဖွဲ့’ပေါ်ခဲ့တယ်။ ‘တို့ဗမာအစည်းအရုံး’ ကြွေးကြော်သံ ‘ဗမာပြည် – တို့ပြည်၊ ဗမာစာ – တို့စာ၊ ဗမာစကား – တို့စကား’ဆိုတဲ့ ကြွေးကြော်သံကို ထပ်တူလက်ခံပြီး တို့ဗမာအစည်းအရုံးနဲ့လက်တွဲပြီး နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေးလုပ်ခဲ့ကြတယ်။
ဒီကနေ့ အစ္စလာမ်ကောင်စီက ‘မွတ်စလင်မ်ပီသရေး၊ တိုင်းရင်းသားပီသရေး’ဆိုပြီးလမ်းနှစ်သွယ်ချမှတ်ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် မွတ်စလင်မ်ပီသရေးအတွက် အာန်ဆွာရီသင်တန်းများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အဆင့်မြင့်မားစွာ ပို့ချဖို့လိုအပ်သလို တိုင်းရင်းသားပီသရေး(အမျိုးသားရေး)အတွက် အဆင့်မြင့်သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ပို့ချဖို့ကိုလည်း အထူးလိုအပ်ပါတယ်။ တစ်ဆက်တည်း ဒီနေရာမှာ ပြောချင်တာက ကိုယ့်သမိုင်းကို ကိုယ်တိုင်မသိကြရင် တိုင်းရင်းသားကောင်းများဖြစ်လာဖို့ မလွယ်ပါ။ အနာဂတ်ရင်လေးဖို့ကောင်းပါတယ်။ ဗိုလ်မှူးဘရှင်ချခဲ့တဲ့ လမ်းညွှန်မှုဟာ ‘ဘယ်ကိုသွားကြမှာလဲ’ဆိုတဲ့ လမ်းကြောင်းပါ။ သက်ဆိုင်ရာ ပညာရှင်များကလည်း ‘သမိုင်းပျောက်ရင် ဇာတိပျောက်မယ်၊ ဇာတိပျောက်ရင် မျိုးချစ်စိတ်ပါ ပျောက်လိမ့်မယ်’လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ဒီအခြေအနေတွေကို ကျွန်တော်အပါအ၀င်ကောင်စီအဆင့်ဆင့်ရှိ ခေါင်းဆောင်တချို့ စိုးရိမ်သောကရှိခဲ့တာကြောင့် ကောင်စီဌာနချုပ်ဥက္ကဌကြီး ဟာဂျီဦးသိန်းနှင့် အကြေအလည်ဆွေးနွေးပြီး သာသနာရေး၊ အမျိုးသားရေးမှန်ကန်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ မေမြို့(ပြင်ဦးလွင်) ၁၅-ကြိမ်မြောက် ဦးစီးညီလာခံမှာ အဆင့်မြင့်သင်တန်းဖွင့်လှစ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။
“သမိုင်းတို့သာလျှင် တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံသားအားလုံးတို့အတွက် သက်သေခံဖြစ်မှာပါ”
အားလုံးအပေါ်သို့ ချမ်းမြေ့သာယာမှုအပေါင်းသက်ရောက်ပါစေ ……….. အာမီးန် …..
ပသီဦးကိုကိုလေး၏ တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံသား အစ္စလာမ်သာသနာဝင်တို့အတွက် ခေါင်းစဉ်(၄)ရပ် စာအုပ်မှ ပထမအပိုင်းကို ကူးယူတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယပိုင်း “မြန်မာနိုင်ငံနှင့်အစ္စလာမ်သာသနာ”ခေါင်းစဉ်ကို ဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။
Posted by waing
Credit : http://islam-yaungche.blogspot.com/2010_05_01_archive.html
This entry was posted in History, Pathi and tagged Post. Bookmark the permalink.
← 37 – သောင်းပြောင်းထွေလာ လေ့လာဏရာ
၁၈၂၃ မတိုင်မီက စ၍မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပင်ရင်းနိုင်ငံအဖြစ် အခြေစိုက် အတည်တကျနေထိုင်ခဲ့သည့် မျိုးနွယ်စုတိုင်းရင်းသားများစာရင်း →